कांग्रेसले गल्तीको प्रायश्चित्त यसरी गर्न सक्छ
विश्वमा नेपालको तीनखम्बे चिनारी थियो, हिन्दूराष्ट्र, लुम्बिनी र सगरमाथा । तिनमा हाल हिन्दूराष्ट्रको एउटा खम्बा भाँचिएको छ, राजनीतिक पण्डितहरूले भाँचेका छन् । पहिचानको तीन खम्बा हुँदा त नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र केही हदसम्म सामाजिक मामिलामा पनि भारतीय दृष्टिले हेर्ने धेरै थिए । अझ दुःखको कुरो त के भने तीमध्ये केही त भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने पनि यदाकदा फेला पर्छन् । हालै दक्षिण अमेरिकी केही मुलुक घुमेर फर्केका एक जना मित्र भन्दै थिए– ‘त्यहाँका कतिपय मानिसमा नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्नेसम्म जानकारी छैन । यस्तो अवस्थामा एउटा खम्बा राजनीतिक स्वार्थमा विनिमय भएपछिको स्थिति कस्तो होला सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले नेपालको पहिचान बढाउन पनि देशलाई पुनः हिन्दूराष्ट्रमै फर्काउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको यस सम्बन्धी मौजुदा पहिचान मेटाउने काम नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो र यसैको कारण सबैभन्दा बढी मार खाने पनि नेपाली कांग्रेस हो । उसले जनताप्रति अलिकति मात्र इमान्दारी देखाएको भए न नेपालको हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटिने थियो न उसको राजनीतिक अवस्था नै यति बढी दयनीय हुने थियो ।
कांग्रेसी नेतृत्वमा त्यति पनि दूरदर्शिता देखिएन । शायद नेतृत्वलाई त्यतिबेला लाग्यो होला अव पनि हिन्दूराष्ट्रको पहिचान बोक्ने हो भने आफ्नो राजनीति नै समाप्त हुनेछ तर उसको राजनीति सक्ने काम भने उसको सोही सोही कदमले गरिदिएको छ र पुनः हिन्दूराष्ट्रकै पक्षमा नउभिएसम्म उसको राजनीतिले पुनर्जीवन पाउला जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो अवस्था हाल सुदूर क्षितिजसम्म पनि देखिएको छैन । यसको आभाष केही कांग्रेसी नेतामा हुनथालेको प्रतीत हुन्छ । महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको छटपटीले यस्तै सङ्केत गर्छ । उनी केही समययता खुलेरै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिन थालेका छन् । शायद यो कांग्रेसी गल्तीको प्रायश्चित्त हुनुपर्छ । शायद उनले यस मुद्धालाई महासमितिको आसन्न बैठकमै उठाउने छन् । सलाम छ डा. साहव ! तपाईको चिन्तनलाई । कम्तीमा तपाईंले त्यतिहदसम्मको दूरदर्शिता देखाउनु भयो । अन्य नेता त अझै अझै सुतुरमुखे प्रवृत्तिमै रमाइरहेका छन् ।
हिन्दूराष्ट्रको मामिलामा राप्रपाको अवस्था पनि करीव यस्तै छ । उसले हिन्दूराष्ट्रको नारा लिएर आउँदा जनताले केही आशा गरेका थिए । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा अछुतको नियति भोग्न वाध्य भएको यस पार्र्टीले दोस्रो निर्वाचनमा पाएको उपलब्धिलाई यसैभित्र लिन सकिन्छ । उसले त्यतिबेला समानुपातिकबाट २४ सिट पाएको थियो, जबकि पार्टीनेताहरूमध्ये कसैले पनि प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जित्नसकेका थिएनन् । यसको अर्थ हो जनताले राप्रपाका नेताहरूलाई होइन, पार्टीले लिएको हिन्दूराष्ट्रको नारालाई मन पराएका हुन् तर नेतृत्वको ढुलमूले चरित्रका कारण आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यसलाई समेत टिकाउन सकेन ।
यस्तो अवस्थामा भाँचिएको खम्बा जोड्ने भनेको धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूले नै हो तर दह्रो नेतृत्वको अभावमा तिनले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रथमतः यसको नेतृत्व विश्वहिन्दू महासङ्घले गर्न सक्नुपथ्र्यो तर राजनीतिक स्वार्थका कारण ऊ आफै कुन दुलोमा छ भन्नुपर्ने अवस्था छ । चाहेको भए जगद्गुरुपीठले पनि नेतृत्व लिन सक्थ्यो तर उसले पनि खासै चासो देखाएन । हो, जगद्गुरुले गोसंक्षणको सवालमा आवाज उठाएका थिए र त्यसमा केही हदसम्म सफल भएका पनि थिए । साधुवाद छ उनको प्रयासलाई तर हिन्दूराष्ट्रको सवालमा भने उनले पनि खासै केही गर्न सकेनन् । अर्को संस्था हो राष्ट्रिय धर्मसभा । चाहेको भए उसले पनि केही गर्न सक्थ्यो तर ऊ पनि झिनामसिना कर्मकाण्डमै सीमित हुन पुग्यो । उसले हालैको पण्डित सम्मेलनले पारित गरेको १५ बूँदामध्ये एउटा बुँदामा हिन्दूराष्ट्र माग गर्ने कुरो त गरेको छ तर त्यो आफैमा यति बढी मरञ्च्याँसे देखिन्छ कि वैशाखीविना उभिनसम्म पनि सक्ने अवस्था देखिन्न ।
हिन्दूराष्ट्र पुनस्थापित गराउने भर्दो आधार भनेको जनमतसङ्ग्रह नै हो । यदि जनमत सङ्ग्रह गराउने आँट गर्ने हो भने दुई तिहाइभन्दा बढी मत पक्षमा आउनेछ तर यो लर्तरो प्रयासले सम्भव छैन
त्यसैले यसका लागि नइ जस्तो स्वतन्त्र र सक्रिय संस्था नै अघि सर्नुपर्ने देखिन्छ । उसले चाह्यो भने पक्कै केही गर्न सक्छ । ऊसित ईच्छाशक्ति पनि छ र केही हदसम्म स्रोत पनि छ । नभए पनि जुटाउन सक्छ । नइको विशेषता भनेकै विचार नपुर्‍याईं कुनै पनि विषय नउठाउने र उठाएपछि त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याई नछाड्ने हो । राष्ट्रकविको मामिलामा त्यस्तै भएको छ । वाङ्मय शताब्दीपुरुषको मामिलामा त्यस्तै भएको छ । यसलाई राष्ट्रकविले गोरखापत्रमार्फत हालै सार्वजनिक नै गरेका छन् । यथा समय वाङ्मय शताब्दीपुरुष पनि बोल्ने नै छन् । नइको शुरुवाती चरण कस्तो थियो ? हालको अवस्था कस्तो छ ? यी सबै उसको ईच्छाशक्ति र लगनशीलताकै प्रतिफल हो । त्यसैले नेपालको पहिचानमा जोड्ने कार्यमा पनि उसकै अग्रसरता आवश्यकता खट्किएको हो ।
निश्चितरूपमा नइ जस्तो स्वतन्त्र र सक्षम संस्थाले नेतृत्व गर्ने हो भने धार्मिक र सामाजिक मात्र नभई इतर पक्षका समेत सहयोग रहनेछ । यस बाहेक राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि मनग्गे सहभागिता रहने आशा गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा जुन कट्टर कार्यकर्ता छन् उनीहरू त यसै पनि खुलेरै लाग्ने छन् । नेतृत्ववर्गबाट पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहनेमा सङ्का नगर्दा हुन्छ । अझ खुशीको कुरो त के भने सत्तारुढ दलकै कार्यकर्तावर्गबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले पनि त्यसभित्र हिन्दूराष्ट्रलाई माया गर्ने थुप्रै सहृदयी सज्जन छन् ।
हिन्दूराष्ट्र पुनस्थापित गराउने भर्दो आधार भनेको जनमतसङ्ग्रह नै हो । यदि जनमत सङ्ग्रह गराउने आँट गर्ने हो भने दुई तिहाइभन्दा बढी मत पक्षमा आउनेछ तर यो लर्तरो प्रयासले सम्भव छैन । सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरू त यसै पनि यसलाई सुन्न चाहदैनन् । राप्रपा नेपाल र नेपाली कांग्रेसको पनि झण्डै त्यस्तै हाल छ । राप्रपा आफै किन रोइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गलेको नियति भोगिरहेको छ । कांग्रेसी नेतृत्वहरू लोकलाजका कारण घुम्टो उघार्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम उठाउने आँट गर्ने भनेको नइ जस्तै कर्मठ संंस्थाले नै हो । यद्यपि यसबाट राजनीतिक रूपमा तत्काल लाभान्वित हुने नेपाली कांग्रे नै हो । यसले उसलाई मृतसञ्जिवनीकैं काम गर्नेछ तर देश देखाएको वा चिनाएको जस भने उसलाई जानेछ । अरुले नदिए पनि जनताले दिने छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरो भनेकै यही हो ।